HomeWararka CiyaarahaChelsea oo Waayi karta Xidigaha aan la Talaalin Kulanka Champion s League-ga ee lille
January 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka Ingiriiska 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay UEFA ka dalbatay cadeyn ku saabsan in ciyaartoydeeda aan la tallaalin ay ciyaari karaan kulanka ay 16-ka kooxood ee Champions League la ciyaari doonaan kooxda Lille .
Dowladda Faransiiska ayaa xaqiijisay in ciyaartooyda aan laga dhaafi doonin shuruudahooda tallaalka, iyadoo kooxda Thomas Tuchel lagu wado inay u safraan Faransiiska 16-ka Maarso si ay lugta labaad ula ciyaaraan kooxda Ligue 1.
Sharciyada UEFA ee jira ayaa sheegaya in ciyaartoy kasta oo aan awoodin in uu safro sababo la xiriira sharciga dawladda hoose loola dhaqmo sidii in laga helay cudurka ‘coronavirus’, laakiin sharcigan ayaa dib loo eegayaa usbuuca soo socda.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Chelsea ayaa ka walaacsan in qaar ka mid ah ciyaartoydeeda aan loo ogolaan doonin inay galaan Faransiiska, halka Lille ay sidoo kale la kulmi doonto arrimo ay ku soo celinayaan ciyaartoydeeda dalka ka dib lugtii hore ee Stamford Bridge 22-kii Febraayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in UEFA ay tixgelin karto in labada lugood loo beddelo meel dhexdhexaad ah si looga fogaado sharciyada xaddidaya, si kastaba ha ahaatee waxay ka walaacsan yihiin inay wiiqaan dadaalka caalamiga ah ee lagu doonayo in dadka lagu tallaalo.
Hadda, Tuchel ayaa u baahan inuu kor u qaado kooxdiisa ka dib markii ay 13 dhibcood ka hooseeyaan hogaamiyayaasha Premier League ee Manchester City.